news2dago | Ankapobeny | 3
[Ankapobeny ] 01 Septambra, 2010 09:52
[Ankapobeny ] 21 Aogositra, 2010 09:55
[Ankapobeny ] 15 Jolay, 2010 18:31
[Ankapobeny ] 14 Jolay, 2010 13:50
Tena tsy hita tabilao i news2dago
Efa ela marina aho tsy namoaka lahatsoraka ka na ny blaogiko ary tsy nisoratra intsony etsy @ le blaogy mavitrika etsy. TPT
Ny marina dia varaina nijery ity oe mondial a ary varina nanao ilay tsato-piso tao @le lalao yahoo prediction 2010 iny. Vokany 36 @ lalao 64 no mba marina ny tsato-pisoko ary any @ laharana faha 19617 any hono no mba laharako @ vokatra ankapobeny. Mazava ho azy fa dia tsy nahazo na inona na inona ny tena fa niala maina toy ny mpandevina alika TPT indray. Verezin'i "Paul le poulpe" lavitra ranews hoy ny mpitoraka blaogy sasany TPT indray. Dia miarahaba manokana ny "FURIA ROJA" zany fa dia lasany ny amboara volamena milanja 5kg be izao miaraka @ vola 30M€ marina raha mila miasa h@ zafiafy intsony raha izany no mba azoko. Mahay izy matoa nibata ny amboara izay no azo tenenina. Ahoana mihitsy no tsy hibatany ny amboara ekipa 2 malaza be eran-tany izany Fc barcelone izay manana mpilalao 8 ao @ ekipam-pirenena ary 6 avy ao @ Real de Madrid miteny ho azy ny lazany ary tsy tokony hisy ady hevitra intsony satria mendrika ry zalahy izay no azo ambara. Mila miehezaka kely letsy elaisany ry brezila raha te hibata @ 2014.
Tsy nitsanga-menatra kosa ny afrikana fa nahavita nampiantrano tsara iny lalao goavana iny ary azo lazaina fa tsy mena-mitaha @ ireo kianja be any eoropa ny kianja rehetra tatsy afrika atsimo. Ity kianja tao Cape Town ity no tena mba kianja reveko t@ ireo kianja maro nilalaovana t@ iny "world cup 2010" iny.
Manarak'izay dia niandry fatratra izay toraka voatabia sy kiraro nataon'ny GTT ahy io oe nanao ahoana ihany ny akony tany am-pita tany mba hilazao vaovao izay manana. Raikitra mantsy ny fanentanana samy hafa tao @ facebook tao oe tongava maro dia mitondra atody sy voatabia fa ho torahana ireo miaramila gasy manao matso. Misy ho afabaraka eto marina raha tena raikitra io kôzy io. Mijery vaovao etsy sy eroa aho anefa toa tsy misy akony mihitsy aloha hatreto.
[Ankapobeny ] 09 Jiona, 2010 10:20
Bresil h@ farany
Hanomboka indray ny lalao eran-tany eo @ baolina fandaka (sic) ka te hifantoka tanteraka any ny saina hanadino ireo sorisory sy olana nianjady t@ tena tato ato izay.
Taloha a rehefa hanomboka ohatr'izao itony mondial itony de efa vitako daholo ny pronostic isakarazany. T@ ty anefe tena ohatra tsy rotitra firy izany asa na nisy inona fa de hiezaka ny hanaraka ihany raha misy ny fotoana.
Tsy miala @ rabre mihitsy na ho any na tsy ho any. Ny "favoris" mantsy "favoris" foana ary ny mijery anzala manao baolina de efa mahavarina toy ny iray minitra mihitsy dia tapitra ny 90mn io rhf mijery breziliana milalao baolina kinga ara teknika koa ka mahafinaritra ny maso ny mijery azy. Ny hirarina ho resy aloha indrindra kosa dia i lafrantsa asa moa na ny fitsabahany mivantana @ raharaha aty afrika no tena mankaleo ahy fa dia tena ekipa tsy tiko mihitsy ity lafrantsa ity efa h@ izay mihitsy. Mba hiverina aminy indray ilay nihatra t@ zala t@ 2002 "1er tr de vita" Enga anie.
NY tiako hidona @ famaranana kosa dia angletera sy espana ary ny ekipa afrikana mety ho lasa lavitra indrindra @ ty kosa dia i Afrika Atsimo. Tombatombana daholo moa ireo fa aoka ny fahaizana mamono baolina no hitsara azy. Alaivo ato ary ny praogramafa hijery baolina indray alo mandritra ny 1 volana misy azy indray rafotsy fa hangatsika ireo atsy ambadika atsy lol.
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 38 39 40 Manaraka»